Akụkọ - Etu ị ga -esi wedata ọnụ ahịa nrụpụta PCB gị?
Etu ị ga -esi wedata ọnụ ahịa nrụpụta PCB gị?
N'afọ a, ọrịa ọrịa okpueze ọhụrụ metụtara, ntinye nke akụrụngwa PCB ezughi oke, ọnụ ahịa akụrụngwa na -arịkwa elu. Ụlọ ọrụ ndị metụtara PCB emetụtakwala nke ukwuu. Maka oganihu nke oru ngo a, ndị injinia ga -atụle imezi atụmatụ iji belata ọnụ ahịa PCB. Mgbe ahụ, kedu ihe ga -emetụta ọnụ ahịa nrụpụta PCB?
Isi ihe na -emetụta ọnụ ahịa PCB gị
1. PCB nha na oke
Ọ dị mfe ịghọta etu nha na oke ga -esi metụta ọnụ ahịa PCB, nha na oke ga -eri ọtụtụ ihe.
2. Ụdị ihe eji eme ihe
Ụfọdụ ihe pụrụ iche ejiri na ụfọdụ ọnọdụ ọrụ ga-adị oke ọnụ karịa ihe nkịtị. Ịhazi mbadamba sekit na-adabere n'ọtụtụ ihe dabere na ngwa, nke na-achịkarị site na ugboro na ọsọ nke ịrụ ọrụ, yana oke okpomọkụ ọrụ.
3. Ọnụ ọgụgụ nke akwa
ọkwa ndị ọzọ na -atụgharị ka ọ bụrụ ọnụ ahịa ndị ọzọ n'ihi ọtụtụ usoro mmepụta, ihe ndị ọzọ, yana oge mmepụta ọzọ.
4. PCB mgbagwoju anya
Mgbagwoju anya PCB dabere na ọnụọgụ akwa na ọnụọgụ nke vias na oyi akwa ọ bụla, n'ihi na nke a na -akọwa ọdịiche nke akwa ebe vias na -amalite ma kwụsị, na -achọ ọtụtụ lamination na usoro mkpọpu ala na usoro nrụpụta PCB. Ndị na-emepụta ihe na-akọwa usoro mkpuchi ahụ dị ka ịpị akwa ọla kọpa abụọ na dielectric dị n'etiti akwa ọla kọpa dị n'akụkụ site na iji okpomoku na nrụgide wee mepụta laminate PCB nwere ọtụtụ.
Kedu otu esi ebuli imewe gị?
1. Track na oghere jiometrị- onye dị gịrịgịrị dị oke ọnụ.
2. Njikwa impedance- usoro usoro ọzọ na-abawanye ọnụ ahịa.
3. Ogo na ọnụọgụ oghere- oghere ndị ọzọ na obere diameters draịva na-akwụ ụgwọ elu.
4. vias akpọnyere ma ọ bụ jupụta yana ma ejiri ọla kọpa kpuchie ha- usoro usoro ọzọ na-abawanye ọnụ ahịa.
5. Ọla kọpa dị n'ígwé- ọkpụrụkpụ dị elu pụtara ọnụ ahịa dị elu.
6. Imecha elu, iji ọla edo na ọkpụrụkpụ ya- Ihe ọzọ na usoro nhazi na-abawanye ọnụ ahịa.
7. Nwepụ-nnwere onwe siri ike dị oke ọnụ.
Ihe ndị ọzọ na -emetụta ọnụ ahịa gị.
Ihe ndị a dị ọnụ ala nke metụtara ụdị III dabere na ha abụọ, onye nrụpụta na itinye PCB. Ha gụnyere:
1. PCB ọkpụrụkpụ
2. Ọgwụgwọ elu dị iche iche
3. masking mkpuchi
4. Mbipụta akụkọ mgbe ochie
5. Klaasị arụmọrụ PCB (IPC Klas II/ III wdg)
6. PCB contour- kpọmkwem maka z-axis routing
7. Akụkụ ma ọ bụ ihu plating
PHILIFAST ga -enye gị ndụmọdụ kacha mma maka ya iji nyere gị aka belata ọnụ ahịa bọọdụ PCB.